အဆိုပါ HARD DISK ကိုအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ - HARD DISK ကို - 2019
အဆိုပါ HDD အပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ
Hard Disk ကို Drive ကို (HDD) - device ကိုများအတွက်အချိန်ပြည့်အလုပ်လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမပါဘဲမည်သည့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများပြီးသားသူဖြစ်ကောင်းရှုပ်ထွေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်း၏အမြင်များတွင်အများဆုံးထိခိုက်လွယ်အစိတ်အပိုင်းကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဤကိစ်စတှငျ PC များ, မှတ်စုစာအုပ်ပြင်ပ HDD ၏တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများကိုသငျသညျစနစ်တကျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကနေကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် device ကိုလည်ပတ်ပုံကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: သင့် hard drive ကိုအတွက်ကဘာလဲ
Hard Disk ကို Drive ကိုအင်္ဂါရပ်များ
ကိုယ်ကျင့်တရား hard drive ကိုရှည်လျားနေ့စွဲထဲကခဲ့သည့်အချက်ကိုနေသော်လည်းယနေ့တိုင်သူ့ကိုရန်မအလားအလာအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ solid state drive (SSD) ကိုပိုမြန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ရန်နှင့်ရထားလမ်းချို့ယွင်းချက်အများစုဆုံးရှုံးပေမယ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပိုပြီးမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူမော်ဒယ်အပေါ်အထူးသဖြင့်သိသာဖြစ်သောမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ဒေတာရေးမူလတန်းသိုလှောင်မှုအရင်းအမြစ်သံသရာ၏နံပါတ်ပေါ်အချို့သောကန့်သတ်နိုင်ဖို့, သူတို့ကမရဖြစ်လာ နိုင်။
အတော်များများကအသုံးပြုသူများနေဆဲလာရန်နှစ်ပေါင်းအချက်အလက်များ၏အတော်ကြာ terabytes တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ခွင့်ပြု, HDD များအတွက်ရွေးချယ်။ ဆာဗာနှင့်ဒေတာများ-စင်တာအဘို့နှင့်အဆင့်မြင့် hard disk ကို drives တွေကိုအစုတခုဝယ်ယူနှင့် RAID-Array ကိုသို့သူတို့ကိုငါပေါင်းစပ်ပြီးကဲ့သို့အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
အနာဂါတ်ကာလတွင်၌ရှိသကဲ့သို့, လုံးဝ SSD ကိုများနှင့်အခြားသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာသို့ပြောင်းရန်လူအတော်များများရုံ hard disk ကိုအတူအလုပ်၏စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များသည်သူ၏အမှားအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုနှုတ်ဆက်ပြောပါသို့မဟုတ်ယင်း၏ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပရီမီယံပေးဆောင်ရန်အဘို့အလိုခငျြပါဘူးသူကိုလူတိုငျးအတှကျသကျဆိုငျရာနှင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်, ဒေတာမဟုတ် ပြန်လည်နာလန်ထူ။
စနစ်အတွင်းမှမလျော်ကန်သော positioning ကို
ဤအကြောင်းအရာသည်စနစ်ယူနစ် desktop ပေါ်မှာတပ်ဆင် HDD, ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အလျားလိုက် groove နှင့်အတူသိုလှောင်မှုယူနစ်ဘေးဖယ်ထားဖို့အားလုံးနီးပါးကိစ္စများတွင် - ဒီစံပြ positioning ကိုကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ တခါတရံမှာသို့သော် user ကိုမှန်ကန်စွာနေရာမရှိခြင်းကြောင့်, ဥပမာ, အထူးအခန်းထဲမှာနေရာမပေးနိုငျသညျ, နှင့်ရထားလမ်း့ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်ဖြစ်စေ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွင်းမည်သည့်နေရာလွတ်ယူပါ။
ဘုံအထငျမှားဆန့်ကျင်ဘက်အဆိုပါဒေါင်လိုက်အစီအစဉ်, ဆိုးရွားစွာအလုပ်မထိခိုက်ပါဘူး။ ထိုမှတပါး, အိမျတျော၌အမြော်အမြင်ရှိရှိ လုပ်. , HDD တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆာဗာများကိုတိကျစွာဒေါင်လိုက်တည်ရှိသည်။ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရွေးချယ်စရာများများအတွက်ယေဘုယျညာဘက်ရှိ: အ hard disk ကိုထက်ပိုမိုအားဖြင့်ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်အနေအထားကနေသွေဖည်မထားရပါ 5°။ ထို့အပြင်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြို့ရိုးတဘက်တိုက်ရိုက်ပိတ်ဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ - က PC ကို drive ကို၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကနေနေရာလွတ်တစ်ခုအနည်းဆုံး margin ကကွဲကွာရမည်ဖြစ်သည်။
အလျားလိုက်အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းနောက်ထပ်ဂျမမှန်ကန်ကြောင်း - တက်ဝတ်စားဆင်ယင်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, convection အဖုံးကနေကျိုးပဲ့ခြင်းနှင့် HDA မလုံလောက်အအေး။ ထို့ကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်ညီဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အပျက်သဘောတစ်ခုလုံးကို HDD ၏အရင်းအမြစ်အပေါ်သက်ရောက်မှု, အထူးသဖြင့်အများအပြားပြားရှိခြင်းသောအတွင်းပိုင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သံလိုက်အကြီးအကဲများ၏ positioning ကို၏မြန်နှုန်းများအပြင်ဒီတော့လျှော့ချ။
ရှားပါးပေမယ့်နေဆဲ installation ကိုကဒ်အထိ related ဖြစ်ရပ်များ၏ဗိုင်းလိပ်တံ bearing စစ်ဆင်ရေး၏ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအခြို့သောကာလပြီးနောက်ထွက်ပေါက်ကြားနှင့်ပန်းကန်များအမဲဆီနှင့်သံလိုက်ခေါင်းကိုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အထက်ပါနှင့်အတူကွန်နက်ရှင်မှာ, အကြိမ်အနည်းငယ်စဉ်းစားရန်ထိုက်တန်သည်, အဲဒါကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာသိုလှောင်မှုနဲ့စာဖတ်ခြင်း load ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, disc ကိုစားဆင်ယင်ထူထောင်ရန်သဘောမျိုးလုပ်ပါဘူး။
ကြာကြာအရည်အသွေးကိုလျှပ်စစ်ပေးဝေရေးတောင်းဆိုခေတ်သစ် drives တွေကို။ မိမိအမအောင်မြင်မှုများနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲကွန်ပျူတာနှင့်အလွယ်တကူအသစ်တစ်ခုကို HDD နှင့်အတူကျိုးကဏ္ဍများသို့မဟုတ်ပြည့်စုံအစားထိုး reassigning, ပုံစံလိုအပ်သည်ကိရိယာသို့လှည့်တို့သည်ကျိုးပဲ့နှင့် hard drive ကိုအလုပျနိုငျသညျ trips ။
ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများဖြစ်ပျက်မှု၏ရင်းမြစ်များ (ထိုဧရိယာများတွင်တစ်ကေဘယ်ချိုးကြောင့်ဥပမာ) ဗဟိုအာဏာကိုနှောင့်အယှက်မသာဖြစ်ကြပေမယ့်စနစ်ယူနစ်အတွက် installed မှားရွေးချယ်ရေးပါဝါယူနစ်။ အနိမျ့ power supply စွမ်းရည်မကြာခဏ hard drive ကိုလုံလောက်အောင်အစားအစာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဦးဆောင်နှင့်ပယ် crash မှစတင်သည်, ကွန်ပျူတာ၏အတွက် configuration ကိုက်ညီတဲ့မထားဘူး။ သို့မဟုတျ, သငျသညျမျိုးစုံ hard disk ကို drives တွေကိုရှိပါက, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပြည်နယ်, hard drive တွေမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများမှပဲထိခိုက်ကြောင်း, သင်သည်သင်၏ PC ကိုစတင်ရန်အခါတိုးလာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ကလစ်များအတွက်အကြောင်းရင်းများသင့် hard drive ကို၎င်း, မိမိတို့ဖြေရှင်းချက်
လျှပ်စစ်မီးမကြာခဏကျိုးထောက်ပံ့ရေးတစ်ခုမပြတ်မတောက် power supply (UPS) ရရှိရန်လိုအပ်သည်နှင့်၎င်း, built-in ရှိမရှိအတူတကွကွန်ပျူတာအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုလိုအပ်ပါတယ်ထားတဲ့ PC ကို power supply ယူနစ်, etc (ဗီဒီယိုကဒ် Motherboard က, hard drive ကို, အအေး, စစ်ဆေး - ဒီမှာ output ကိုသိသာဖြစ်ပါသည် ) ။
ငါကွန်ပျူတာစားသုံးမည်မျှ watts ကဘယ်လိုသိသလဲ
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်ခုမပြတ်မတောက် power supply ရွေးချယ်ခြင်း
ဒီမှာအခက်အခဲနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောစုစုပေါင်းဆိုပါကအထူးအရေးကြီးပါတယ်သော hard drive ကို၏မသငျ့လျြောတပ်ဆင်ခနှင့်အတူနောက်တဖန်စတင်။ အပေါ်ကအပိုင်းမှာတော့ကျနော်တို့၏တည်နေရာပြီးသားတက်ပေးဆောင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းကိုစကားပြောထိခိုက်စေပေမယ့်မြင့်မားသောအပူချိန်၏တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ပါတယ်။
သင်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားသိကြသည့်အတိုင်း, Desktop ကွန်ပျူတာများအတွက် hard drive တွေ 5400 Rev / မိနစ်တစ်မြန်နှုန်းရှိသည်။ သို့မဟုတ် / မိနစ် 7200 Rev ။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, အဆုံးအသုံးပြုသူရှုထောင့်နှင့်အတူမလုံလောကျ အဆိုပါ HDD အပေါ်ကိုဖတ်ပြီးရေးအမြန်နှုန်း SSD ကိုထက်သိသိသာသာနိမ့်ပေမယ့်အမြင်များ၏နည်းပညာပိုင်းအချက်အနေဖြင့်အများအပြား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခိုင်မာတဲ့မြှင့်တင်ရေးကိုပိုပြီးအပူထုတ်ပေးပါကမြင့်မားသောအပူချိန်ဖို့ HDD အအေးအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်, ယေဘုယျအားဖြင့်, ထိုစက်ပြင်များအတွက်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်အရေးယူထဲက drive ကို၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုမထားကြဘူး - က၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့ - သံလိုက်ခေါင်းကို။
ဒီနောက်ဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်ပါလျှင်ဆိုးရွားသွားသို့မဟုတ်လုံးဝမရသာဒေတာအသုံးပြုသူများကိုမှတျတမျးတငျထား, ဒါပေမယ့်လည်း servo ဖတ်ရှုနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျရှုံးခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကို HDD ထဲမှာခေါက်နှင့် operating system နဲ့, BIOS အဖြစ်ကွန်ပျူတာအဆုံးအဖြတ်၏မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: hard drive တွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှ Operating အပူချိန်
ဒါကြောင့်တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, တပ်ဆင်ခြင်း disk ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနှင့်အမတ်နေရာ - အနည်းငယ်။ သည်အခြားအပူသတင်းရပ်ကွက်နှင့်နီးစပ်သူတည်နေရာမှားယွင်းနေ (အားလုံးနီးပါးကို PC components များဖြစ်သော) ။ အဆိုပါဝေးတဲ့ရထားလမ်းပိုကောင်း, လေထွက်လွခံရ, coolers အပါအဝင်အခြား devices များမှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့, အနားကနေတွေအကြောင်းဖြစ်သင့် အခမဲ့အာကာသ3စင်တီမီတာ - က passive အအေးပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ device ကိုအခြား hard disk ကိုမှအနီးကပ်နေရာချမပေးသင့်ပါဘူး - ဒါကြောင့်မလွှဲမရှောင်ကသူတို့အလုပ်၏ပျက်စီးခြင်းကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်သိသိသာသာပျက်ကွက်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ အလားတူ CD / DVD ကို-drive ကိုရန်၎င်း၏နီးကပ်သက်ဆိုင်သည်။
သေးငယ်တဲ့ပုံစံအချက်အိမ်ယာ (မိုက်ခရို / Mini-ATX) နှင့် / သို့မဟုတ်ရထားလမ်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က Hard disk ကိုအဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေမှန်ကန်သောနေရာချထားပါကမှန်ကန်သောတက်ကြွအအေးဂရုစိုက်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ဒီအဘယ်သူ၏လေကြောင်းအဆိုပါစတိုးဆိုင်တာမျိုးဟာအလယ်အလတ်-ပါဝါအေးမှုတ်, ရှိနိုင်ပါသည်။ လည်ပတ်ခြင်း၏မြန်နှုန်းအအေးကနေရရှိလာတဲ့ hard disks နှငျ့အပူချိန်၏အရေအတွက်အတိုင်းချိန်ညှိရပါမည်။ စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းတုန်ခါမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု, သူတို့အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကွောငျ့ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပန်ကာ, ဘယ်မှာ HDD အောက်မှာတောင်း, တူညီတဲ့မြို့ရိုးပေါ်မှာဖြစ်ဖို့မ သာ. ကောင်း၏။
coolers ထိန်းချုပ်ဘို့ Software များ
အဆိုပါ hard disk ကို၏အပူချိန်ကိုတိုင်းတာဖို့ကိုဘယ်လို
လူအပေါင်းတို့သည်ကို PC ၏အပူချိန်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာသာထိခိုက်နစ်နာအေးဒါပေမယ့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
အနိမ့်သောအပူချိန် - မလျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်အမြင့်ဆုံးထက်။ အခန်းထဲမှာအအေးသို့မဟုတ်ပြင်ပ အကယ်. သိုလှောင်ရေးကိရိယာကအခန်းအပူချိန်ဖို့သဘာဝကျကျနွေးဖို့လိုအပ်အသုံးမပြုခင်, လေထုအပူချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့0°ဖြစ်ပါတယ်ရှိရာလမ်းမှယူဆောင်ခဲ့သည်။
ပိုလျှံအစိုဓာတ်ကို - က hard disk ကို၏အပူခုခံလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်။ ပုံမှန်စိုထိုင်းဆမှာမလိုအပ်ပါဘူးပေမယ့်အကြောင်း, တောင်ပျော့အပူမှာက drive ကိုအပိုဆောင်းအအေးလိုအပ်ပါသည်တစ်ဦးစိုစွတ်သောအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ (ဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ကိုအနီးလမ်းပေါ်မှာ) ဖြစ်ပါသည်။
ဝုဏ်အတွင်းညစ်ညမ်းမှု - က Hard disk ကိုနောက်ထပ်ရန်သူ။ ၎င်း၏မဲဆန္ဒနယ်ဒြပ်စင်တစ်ခုမှာ, ပုံမှန်အတွင်းဖိအားအပေါက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ မလွှဲမရှောင်, လေထုကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့မှတဆင့်ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ, ကြောင်းမွမှေုနျ့နှငျ့အပျက်အစီးများနှင့်အတူညစ်ပတ်လျှင်ပင် built-in ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်များကိုအတူ filter ကိုအဟန့်အမှုန်ကယ်တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့မြေမှုန့်, ​​HDD ပျက်ကွက်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်း။ ဒါဟာကအနည်းဆုံးပိုမိုပါးလွှာအကာအကွယ် filter များလည်းမရှိကတည်းကဒီပုံစံအချက် 2.5 "ဟုအဆိုပါ 3.5 ထက်သိသိသာသာပိုပြီးထိတွေ့" မောင်းသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကျိုးနပ်သည်။
မဆိုအန္တရာယ်ရှိသောအငွေ့ - ကဒီမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောနိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်သည် .ionizer, လေထုထဲတွင်အညစ်အကြေး, ပါဝင်သည်။ သူတို့ကချေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပြည်တွင်းရေးစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများ wear နှစ်ဦးစလုံးကိုနှိုးဆော်ခြင်း။
လျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်ပြင် - သင်မှတ်မိစေခြင်းငှါသကဲ့သို့, disc ကို "သံလိုက်ခက်" ဟုခေါ်ဒါ demagnetization ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်အထောက်အကူနှင့် HDD ဖတ်လို့မရအောင်အသွင်ပြောင်းဖြည်းဖြည်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့လျှပ်စစ်သံလိုက်လယ်ကိုထုတ်ပေးသည်။
ငြိမ်စိတ်ဖိစီးမှု - တောင်မှလူ့ခန္ဓာကိုယ်အီလက်ထရွန်းနစ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့စွဲချက်, စုဆောင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ဥပမာ, အခကြေးငွေမရှိဘဲရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်များနှင့်အပုဒ်ထိမ, မြေပြင်သိုင်းကြိုးကဒီ HDD ကို အသုံးပြု. လူတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်တစ်စက်ပစ္စည်းအသစ်အစားထိုးသို့မဟုတ် install လုပ်သည့်အခါမူလတန်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစောငျ့ရှောကျရန်အကြံပြုပါသည်။
အတော်များများကသူ့အလုပ်နှောက်ယှက်ဖို့မ, HDD တင်ပို့ကနေအများဆုံးဂရုတစိုက်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သောကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကုမ္ပဏီများသည်ဤအမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း output ကို HDD ပျက်ကွက်၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းကဒီနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ မဆိုသက်ရောက်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်ရန်, ကြောင့်ပြင်ပသာ, ဒါပေမယ့်လည်းစံ embedded 3.5 "မော်ဒယ်များမဟုတ်စိုးရိမ် အမှတ်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှားယွင်းစွာစနစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုထဲမှာ installed လျှင်တုန်ခါမှု embedded HDDs, အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ညံ့ဖျင်းလွဲချော်သွားတာသော့ခလောက်တစ်ခုယောက်ျား၏ခန္ဓာကိုယ်ရန်အေးသို့မဟုတ်မတော်တဆရိုက်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတုန်ခါလိမ့်မယ်မောင်းတယ်။ ချောင်အနားယေဘုယျတုန်ခါမှု drive ကိုအရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည် - ။ အဆိုပါ HDD တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှအချိုးကျသည့်ဝက်အူ4တွဲနှင့် 2/3 မဟုတ်သောအခါတူညီသည်ဂျသက်ဆိုင်
အဆိုပါ hard drive ကိုမှအမှုအတွင်းပိုင်းနှင့် PC ကို၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်
ပရိသတ်များ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာနေသမျှကာလပတ်လုံးအသုံးပြုသူလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်နဲ့ကိုးရိုးကားရားနည်းလမ်းအအေးမပြောင်းပါဘူးအဖြစ်မျှပြဿနာများရှိသည်။ သို့သော်အချို့တန်ဖိုးနည်းအိမ်ဖောင်းပွအေးထံမှတုန်ခါမှုသင့် hard drive ကိုမှမြို့ရိုးအရှောက်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သော, အကံဆိုးသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အရည်အသွေးပစ္စည်းများအနေဖြင့်တတ်နိုင်သမျှအစကတည်းကထံမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
အခြားအ HDD, drives တွေကို။ သူတို့ကိုအကြား space ၏မရှိခြင်းအပူနှင့်အပြန်အလှန်တုန်ခါမှုသာပြောခြင်းငှါ။ CD / DVD ကို-drives တွေကိုမကြာခဏမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှာ operate နှင့် optical disk တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ drive ကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်နေတဲ့တုန်ခါမှုဖန်တီးဖြစ်ပေါ်စေကွဲပြားခြားနားသောမြန်နှုန်းရှိနိုင်ပါသည်။ HDD လည်း drive ကိုသူ့ဟာသူများအတွက်အရေးပါမဟုတ်ကြောင်းဗိုင်းလိပ်တံ၏ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပတ်၏ positioning ကိုအများစုမကြာခဏသူတို့ကိုယ်သူတို့တုန်ခါပေမယ့်အိမ်နီးချင်းတို့အတွက်ဆိုးကြောင့် အမြန်နှုန်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုကာလကိုသူတို့ကွာခြား။
အနီးအနားမှာအချို့ပြင်ပအရင်းအမြစ်နှင့်တုန်ခါမှုဖြစ်စေတဲ့ရှိပါတယ်။ ဒါကအိမ်မှာရုပ်ရှင်ရုံစနစ်, တစ်ဦး subwoofer နှင့်အတူပီ။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုး၌အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
သဘာဝကျကျ, အထူးသဖြင့်ပြင်ပတွင် hard disks ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, စဉ်အတွင်းလွှဲမရှောင်သာတုန်ခါမှု။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဤဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးက USB flash drive ကိုမှ device ကိုအစားထိုး, ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်, အဲဒါကတစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အိုးအိမ်နှင့်အတူပြင်ပ HDD ကိုရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ပြင်ပ hard drive ကိုရှေးခယျြရာတှငျအဘို့အသိကောင်းစရာများ
ဒါဟာပျင်းရိပြည်နယ်၌ရှိသကဲ့သို့, သံလိုက်ခေါင်းယာဉ်ရပ်နားအများကြီးအတွက်ယခုအချိန်တွင်အတွက်ဖြစ်ခြင်း, အ disc ကိုပြားမထိခိုက်စေဘူး, off-ပြည်နယ် hard drive ကိုအတွက်လျော့နည်းသပိတ်ကြောင့်ထိခိုက်ကြောင်းလူသိများသည်။ ဒါပေမယ့်ပင်အာဏာနှင့် HDD မပါဘဲကျသွားနှင့်ရိုက်၏ကြောက်လန့်နေကြသည်မဟုတ်သည်ဟုမထင်ကြဘူး။
တောင်အနိမ့်အမြင့်ထံမှကျဆင်း, ကိရိယာက၎င်း၏ဘက်မှာမြားအထူးသဖြင့်လျှင်, ချိုးနှိမ့်ချ၏အန္တရာယ်ကိုပြေး။ ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်လျှင်, သိမ်းဆည်းထားသည့်ဒေတာမှပျက်စီးမှုနှင့် HDD ၏အခြားဒြပ်စင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုးပွားစေပါသည်။
စနစ်အတွက်ခိုင်မြဲစွာ fixed hard disk ကိုယူနစ်ရေတံခွန်နှင့်ပြန်တယ်မှကာကွယ်လိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ခြေထောက်မှမတော်တဆရိုက်များဖြင့်အစားထိုးကြသည် (စသည်တို့ကိုတစ်ဦးလေဟာနယ်သန့်စင်အိတ်, စာအုပ်, .. ) ။ ကွန်ပျူတာစစ်ဆင်ရေး၌တည်ရှိ၏တဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသည် - များကြောင့် HDD မှသံလိုက်အကြီးအကဲများ operating ပို. ပင်ကျွတ်ဆတ်ဖြစ်လာသည်နှင့်ခြစ်မျက်နှာပြင်ပြားဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိတ်ကာလရဲ့သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ၏ drives တွေကိုအများအပြားမှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာများကိုပိုပြီးပြင်ပလွှမ်းမိုးမှုမှကာကွယ်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ ဒါကကွန်တိန်နာတစ်စျေးမှာ-စုပ်ယူဖွဲ့စည်းပုံမှာသေချာနှင့်အရှိန်အာရုံခံကိရိယာ (သို့မဟုတ်တုန်ခါမှု) ကိုလည်းပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့, အကောင်းဆုံးအဲဒီမှာတစ်စက်ဖြစ်ပြီး, ချက်ချင်းအပြိုင်ပြား၏လည်ပတ်ရပ်တန့်ခြင်း, သံလိုက်ခေါင်းကိုရပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်နေကြသည်။
အဆိုပါ hard disk ကိုပုံမှန်လည်ပတ်တင်းကျပ်စွာချိုးဖောက်အတွက်ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖိအားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဖြေကိုအနည်းငယ်သောဒြပ်စင်များ၏အလွန်သမာဓိရှိဘို့အတွင်းပိုင်း။ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောလူ့လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တင်းကျပ်စွာက, HDD ပေါ်အားကောင်းတဲ့ဖိအားစနစ်ယူနစ်အတွက်တောင်းစူးရှသောထောင့်ကိုဖုံးလွှမ်းလျှင်, drive ကိုတစ်ဦးပျက်ကွက်၏လက်တွေ့ကျကျ 100% အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပြဿနာကိုထိုကဲ့သို့သော sealant သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်တိပ် / ကော်တိပ်အဖြစ်များဖြင့်နည်းလမ်းများနှင့်အတူ (ထို HDD သေးဒဏ်ရာပြီးနောက်အပေါ်မလှန်သောအခါ) သတိပြုမိခြင်းနှင့်အချိန်မီထုံးစံ၌တညျ့ခဲ့လျှင်၏သင်တန်း, သင်ကသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းလေထုသာရလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးမလိုအပ်သော, ဒါပေမယ့်လည်းမြေမှုန့်ရှိပါတယ်။ ပင်သေးငယ်တဲ့ဖုန်မှုန့်အမှုန်ပန်းကန်အပေါ်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သံလိုက်ခေါင်းအုံးရိုက်, ဒေတာအရှုံးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုသာအမှုအာမခံမည်မဟုတ် - ပင် drive ကိုရယူလို့မရနိုင်ပါပြန်လည်ပြုပြင်ရန်။
ဒါကြောင့်ဖုန်မှုန့်ကနေကာကွယ်ပေးမယ့်နည်းပညာပိုင်းအပေါက်ရှိတယ်, - အစောပိုင်းကကျနော်တို့တောင်မှစက်ရုံအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုကို hard drive ကို monolithic မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းဟောပြောသည်။ သို့သော်ဤရေ filter ကိုဆန့်ကျင်နီးပါးအသုံးမကျဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှအနည်းငယ်ကျဆင်းလာသောရေကိုအများကြီးပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်ရှိရာအခြေအနေများ, "မသတ်မှဖော်ပြထားခြင်း« HDD ကိုညွှန်ကြားနိုင်ပါတယ်။
ဤအကြောင်းအရာလုံးဝယခင်တဦးတည်းမှဆင်းသက်လာပေမယ့်ကျနော်တို့သီးခြားစီပွဲတော်ကိုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအရသောအခါ (မြေမှုန့်ကိုစားသုံးမိ, ရေ) အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချို့သောပြဿနာများကြောင့်ဖျက်သိမ်းနှင့်ဆေးကြောခြောက်သွေ့ hairdryer ရမည်ထင်ပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းကသင့်လျော်သောအတှေ့အကွုံမရှိခြင်းမျှအလုပ်လုပ်ပြည်နယ်သို့ပြန်လာကြောင့်ဤသို့ပြု, အကြံပြုသည်မဟုတ်။
သငျသညျအရေးအပါဆုံးအရာချန်လှပ်ခဲ့လျှင် - ထိုစည်းမျဉ်းများအဝိဇ္ဇာ parsing နှင့် reassembly, အဖြစ် hermetic အိမ်ယာ၏ပြန်လာအခြားအကြောင်းရင်းများနောက်ဆုံးတွင်အလုပ်လုပ်ခွအေနအေကနေ hard drive ကိုထုတ်ချပြီး, ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာကအဖုံးဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမဖြစ်သင့်သောလေထုဖြစ်ပြီး, ဒုတိယ - မြေမှုန့်။ ရိုးရှင်းစွာသစ်ကို / အဟောင်းများကိုမြေမှုန့်အမှုန်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်အခြေချဖွယ်ရှိ, သူတို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဖြစ်စဉ်အဆုံးမဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းအနတ္တသာဖြစ်ပါသည် - ကဖယ်ရှားပစ် Get ပင်တပြင်လုံးကိုဆောက်လုပ်ရေးမှုတ်, ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထိုသို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအခန်းနှင့်မာစတာရှင်းလင်းဖို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အခွအေနအပေါငျးတို့သခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူ, နေရာယူပြီး, ဒါပေမယ့်အထူးဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှုစင်တာများအတွက်နေကြသည်။
ကြောင့်ရှုပ်ထွေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် hard drive ကို၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အခြို့သောအခွအေန၏လိုအပ်ချက်များစစ်ဆင်ရေးနှင့်သိုလှောင်မှုအတွက် capricious ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်များ, တွေအများကြီးက၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ထိခိုက်သောကြောင့် HDD ကိုင်တွယ်များအတွက်အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိနှင့်သူတို့နောက်ကိုလိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
ဗီဒီယို Watch: Роутер Xiaomi Mi R1D Englishобзор, тесты скорости, прошивка и мобильное app (သြဂုတ်လ 2019).